क्षेत्र bindweed: गुण निको।
क्षेत्र bindweed दीर्घकालीन बुझाउँछ घाँसदार बिरुवाहरु। यसलाई एक मीटर गर्न को एक घुमावदार स्टेम छ। पातहरु एक त्रिकोणीय आकार, लामो petioles संग वैकल्पिक छ। फूल बिरुवाहरु गुलाबी वा सेतो हुन सक्छ। फल कालो चार बीउ संग बक्स गोलाकार tricuspid प्रतिनिधित्व छ रंग। यो blooms को गर्मी भर। एक भन्दा साधारण तान्नु को - क्षेत्र bindweed। सामा डाटा मुकाबला एक यांत्रिक जोताइ र herbicides को प्रयोग प्रयोग गरिन्छ। यो ariloatsetatnye एसिड (MTSPA, 2.4D), प्रयोग गर्न सकिन्छ Benzoic एसिड (dicamba), nitriles (bromoxynil) imidazolinonaly (imazethapyr, imazamox)। विभिन्न herbicides (dialen सुपर dialen) को मिश्रण संग सामा उपचार गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त छन्।
क्षेत्र bindweed को काकेशस, युक्रेनको रूसी संघ, मध्य एशिया, काजकस्तान, र सुदूर पूर्व युरोपेली भाग पाउन सकिन्छ। यो बोट उपचारात्मक गुणहरू प्रदर्शन। यो उद्देश्य लागि, तपाईं पात, घाँस, जरा र फूल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्षेत्र bindweed, वा बरु यसको जरा प्रारम्भिक वसन्त वा शरद ऋतु, पात, फूल, घाँस मा संकलित हुनुपर्छ - गर्मी (जुन अगस्ट गर्न)। कारण सामग्री konvolvulina बोट गर्न रेचक औषधि प्रभाव प्रदर्शन। को glycoside को एक महत्वपूर्ण राशि जरा र बोट को rhizome भेटिए। पातहरु एस्कोर्बिकएसिड, carotene धेरै समावेश गर्दछ। घाँस एक coagulating एजेन्ट, tocopherol, saponins, तीतो पदार्थ र resinous glycosides समावेश गर्दछ। समान छन् जो पहिचान राल glycosides को जरा र yalapinu kovolvulinu। alkaloids - राल को फूल, र बीउ देखि छुट्टयाएर।
क्षेत्र bindweed शो निको, रेचक औषधि, diuretic, antipyretic, analgesic र विरोधी विषाक्त प्रभाव घाउ। gastritis र enterocolitis को उपचार को लागि decoctions र बीउ वा जरा को infusions प्रयोग गर्नुहोस्। सुक्खा घाँस, वा ताजा pounded जडिबुटी को पाउडर analgesic र छ hemostatic एजेन्ट। घाँस पाउडर घाउ र चोटपटक छर्कियो गर्न सकिन्छ। Ringworm, खुजली, dermatitis - बेहोशी र श्वसन पर्चा, सुकेको पात, जरा एक decoction को सुनिंनु को लागि - फूल को महिला लैंगिक decoction को सुनिंनु मा खपत जडीबुटी को Decoction। एक शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि रूपमा - लोक चिकित्सा मा, rhizome देखि पाउडर एक हाइपनोटिक र मलम रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सकारात्मक परिणाम लागि जडीबुटी वा बोट रस को प्रयोग मा प्राप्त गरेका थिए laryngotracheitis, को उपचार पल्मोनरी क्षयरोग, सिफलिस, atherosclerosis, अस्थमा, hepatitis, वसापजनन, splenitov, उच्च रक्तचाप। बीउ को जलसेक उत्कृष्ट pathogenic एजेन्ट छ। प्रयोग गर्नु अघि, क्षेत्र bindweed एक चिकित्सक संग परामर्श गर्नुपर्छ। यो बोट बेचैनी, उल्टी, पखाला हुन सक्छ प्रयोग छ, किनभने प्रयोग क्षेत्र bindweed लागि contraindications पनि छन्। गर्भावस्था को समयमा तिनीहरूले गर्भपतन वा पहिले जन्म प्रकुपित गर्न सक्छन्, bindweed बीउ प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।
हाम्रो देशमा bindweed बढी भन्दा तीस प्रजाति छन्।
Convolvulus तीन रंगीए पुरातन सौन्दर्य भनिन्छ। क्षेत्र bindweed विपरीत - 50 सेन्टिमिटर को प्रत्यक्ष branching स्टेम लम्बाइ द्वारा विशेषता छ जो एक वार्षिक बोट छ। यो एकांतर प्रबन्ध छन् कि एक रैखिक-lanceolate पात छ। फूल को व्यास लगभग4सेन्टिमिटर छ। फूलहरू बैजनी वा फिक्का नीलो छन्। Zev पहेंलो Corolla।
Bindweed Moorish - कन्टेनर बढ्दै वा बास्केट झुन्डिएको लागि ठूलो बोट। फूल - बैजनी। यो बोट unpretentious छ र विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन। यसलाई खोल्न वा छायांकित क्षेत्रमा दुवै बढ्न उत्तिकै सजिलो छ। तीव्र वृद्धि र फूल पूर्ण सूर्य हुन्छ। Bindweed loamy माटो रुचि र तुसारो डर छ।
बिरुवा लागि मल
हामी साइटमा dahlia Annuals बढ्न
को बिरुवाहरु के हुन्? जो त्यहाँ विकास बिरुवाहरु को समूह?
दौड कार फ्रान्सिस्को Bernoulli "कार 2" कार्टून देखि
तर हिमालय हर्बल: कस्मेटिक्स समीक्षा
चुरोट R1: texte प्रकार र विशेषताहरु